» केबिन ग्लान तामकाङलाई अर्को सफलता
केबिन ग्लान तामकाङलाई अर्को सफलता
१५ माघ २०७६, बुधबार १३:०८
मकवानपुर, १५ माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडलको सिजन ३ मा अहिले गाला राउण्ड चलिरहेको छ । नेपाल आईडलमा रकिङ प्रस्तुति दिँदै चर्चामा आएका केबिन ग्लान तामाङले गाला राउण्डमा पुगेपछि थप चर्चा कमाएका छन् । शुक्रबार प्रस्तुति दिएका उनलाई विशेष अतिथि र तिनै जना निर्णायकलाई स्टाण्डिङ अवेशन दिएका छन् । रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स दिएका केविनले ‘कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमर अफ द डे’ को अवार्ड समेत जितेका छन् । अवार्डसँगै उनले नगद २० हजार रुपैयाँ समेत जित्न सफल भएका छन् ।
शmुक्रबार केबिनले ‘द स्याडोज नेपाल’ को ‘खेलाडी हुँ म’ बोलको गीत गाएर तहल्का मच्चाएका थिए । विशेष अतिथि र तिनै जना निर्णायकहरुले केबिनको प्रस्तुतीको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । केविनको भोटिङ कोड एनआई ०२ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०२ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सकिन्छ । हेर्नुहोस् भिडियो–
नेपाल आईडल सिजन ३ मा धमाका मच्चाउन सफल प्रतियोगी हुन् केविन ग्लान तामाङ । दमदार प्रस्तुतिका कारण चर्चामा रहेका केविन चितवनको पर्सा निवासी हुन् । उनी २२ वर्षका छन् । सानैमा आफ्ना दाजुहरुले गीतार बजाएको देखेर केविन संगीतमा आकर्षित भएका हुन् । पढाई र सँगीतलाई सँगै अगाडि बढाएका केबिनलाई बुवाले उपहार दिनुभएको गीतारले थप प्रगति गर्न हौस्यायो । गायक स्वप्निल शर्मालाई आईडल मान्ने केबिनले सँगीतको यात्राकै क्रममा ‘शास्त्र’ नामक ब्याण्ड जोईन गरे । त्यस ब्याण्डमा केही वर्ष बिताएका केबिन र उनको टिमले पछि अक्टेब ब्याण्ड स्थापना गर्यो । उनी गत ५ वर्षदेखि सोही ब्याण्डमा आवद्ध छन् । विभिन्न स्थानमा गीगहरु गर्दै आएको ब्याण्डलाई उनी निकै माया गर्छन् । ब्याण्डका साथीहरुले उनको अभ्यासका लागि निकै सहयोग समेत गर्दै आएका छन् । म्युजिकलाई आफ्नो प्यासन बताउने उनी सोही प्यासनलाई करियरका रुपमा अगाडि बढाउन चाहान्छन् । उनले बिरगञ्ज अडिसनबाट बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड समेत जितेका थिए । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।